Hooyo iyo canugeeda oo nasiib u yeeshay in iyaga oo keliya laga qaabilo markab siday tahriibayaal - BBC News Somali
Hooyo iyo canugeeda oo nasiib u yeeshay in iyaga oo keliya laga qaabilo markab siday tahriibayaal
23 Disembar 2018
Image caption Canugga ayaa waxaa haatan la geeyay Isbitaalka
Malta ayaa diyaarad ku soo qaadday canug yar iyo hooyadii oo ku sugnaa Markab ay leedahay hay'adda samatabixinta ee badda Mediterranean-ka oo fadhigeedu yahay dalka Spain.
Cannugga ayaa xeebta dalka Libya ku dhashay Saddex maalmood ka hor inta aanay hooyadii soo raacin doonidii ay ku tahriibtay.
Hay'adda ayaa sheegtay in nolosha canugga yar ay khatar ku jirto.
Markabka hay'adda oo soo badbaadiyay dad gaaraya ilaa 300 oo qof oo ay ka mid ahaayeen cannuga yar iyo hooyadii ayaa loo diiday in ay galaan waddamada Talyaaniga iyo Malta inkastoo ay Malta iska fogeeysay eedeeymahaasi.
Malta ayaa sheegtay in markabka uu saraakiisha u sheegay in ay haystaan wixii ay ku noolaan lahaayeen laba maalmood.
Qisooyin qarracan leh oo ay ka sheekeeyeen dhalinyaro laga soo celiyay Liibiya
“Saddex jeer ayaa addoon ahaan Liibiya la iigu kala iibsaday”
Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan
Wiil dhallinyara ah oo tix gabay ka tiriyay rafaadka tahriibka
Dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Talyaaniga Matteo Salvini oo ka tirsan xisbiga midigta fog ayaa bartiisa ku soo qoray " dekedaha Talyaaniga waa la xiray" sidaa darteedna aanan loo ogolaan doonin in muhaajiriinta ay soo galaan.
Hay'adda Proactiva ayaa shegeeysa in markabkeeda uu haatan ku wajahanyahay dekedda Algeciras ee koonfurta Spain, halkaas oo la filayo in muhaajiriinta lagu dejiyo. Dawladda Spain ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in markabka sida muhaajiriinta loo ogolaaday in uu soo aado dhanka Spain, kadib markii loo diiday in uu ku xirto dekedaha u dhaw.
Safarka Spain ayaa waxa uu qaadanayaa muddo shan ilaa iyo lix maalmood ah balse Markab kale oo ay hay'adda Proactiva leedahay ayaa ka hor imanaya, kaas oo sida waxyaabaha aasaasiga ah ee ay u baahanyihiin.
Dhanka kale hay'ad Jarmalka laga leehay oo lagu magacaabo Sea-Watch ayaa sheegtay in ay badda ka soo badbaadiyeen 33 qof oo muhaajiriin ah, iyagana waxa ay dalbanayeen dekedd ay ku soo xirtaan.
Hay'adda Socdaalka Aduunka ee (IOM) ayaa sheegaysa in 1,300 oo qof oo muhaajiriin ah ay naftooda waayeen tan iyo biloowgii sanadkaan iyagoo isku dayaya in ay gaaraan Talyaaniga iyo Malta.